ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ကြောက်….ကြောက်တယ်ကွယ်”
ကံသီပေလို့ကိုပေါရယ်
သူ့ ရဲ့ဆန့် ကျင်ဘက် ဒွါရပေါက်သာ အစစ်ဆေးခံရလို့ ကတော့ အမလေး.........လေး
သွေးထွက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းလေးကိုလဲ ဖြစ်နိုင်ရင်သိချင်ပါတယ်။ ဘာလို့ဆို အကျွန်ုပ်သည်လည်း ကိုပေါကဲ့သို့ ကိုကျော်ခင် နှင့်နေ့စဉ်တွေ့ရင်ကောင်မလား စဉ်းစားနေသူဖြစ်သောကြောင့်တည်း။ ကိုပေါသက်လုံ အချိန်တိုတိုတွင်းတက်လာပုံက အားရစရာပဲ။ အားကစားလုပ်မှုရပ်ထားတုံး ခနလေးနဲ့ rebound ဖြစ်တာတော့ ၀မ်းနည်းစရာပဲ။ သက်လုံတက်တာ မြန်သလို rebound ဖြစ်တာလဲ မြန်လေစွ။
ဖတ်ရတာ သိပ်ပြီး သိပ်စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်။ ကိုပေါက ပိုက်ဖြုတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုတာကို မကြားယောင်ဆောင်နေတယ် ဆိုတာနဲ့ တာဝန်ရှိတဲ့သူက နာရီဝက်လောက်ကြာမှ ရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့ နှစ်ခုကို သိရလို့ စင်္ကာပူရဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေရဲ့ လူနာနဲ့ ဆက်ဆံရေး တစိတ်တဒေသကို ခန့်မှန်းလို့ ရတာလည်း ကျေးဇူးပဲ။ ကိုပေါက ဒီအတွက်ကြောင့် ကျန်းမာရေး လိုက်စားတာကို ရပ်လိုက်တယ် ဆိုတာတော့ မဖြစ်သင့်ဘူး။ ကိုပေါက အလွန်အကျွံလုပ်လို့ ဖြစ်တာပါ။ ဒီလောက် ကြမ်းကြမ်းလုပ်ဖို့ မလိုပေမယ့် ကျန်းမာရေးတော့ ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်လုပ်သင့်ပါတယ်။ အလွန်အကျွံ လုပ်တာမကောင်းသလို ဘာမှမလုပ်ရင်လေည်း မကောင်းပါဘူး။
အီးးးးး တစ်သက်လုံးဖုံးသမျှ ....... :P
Post အသစ်တွေအားလုံးဖတ်သွားပါတယ် ။
ကျန်းမာရေး အရေးကြီးမှန်း အထက်ပါပို့စ်နှစ်ခု ဖတ်ပြီး ပိုသေချာသွားတယ်။ အစ်ကိုနှစ်ယောက်ကတော့ တောင်ကြီးမှာ ကျောင်းတက်တော့ ထုံးဓါတ်ပါတဲ့ ရေတွေ သောက်မိလို့ နှစ်ယောက်စလုံး ဆီးလမ်းကြောင်းမှာ ကျောက်တည်တယ်တဲ့။ သူတို့ နှစ်ယောက်စလုံး ခံလိုက်ရတာ အလူးအလိမ့်။
တားတော့ သူတို့လို တောင်ကြီးမှာ မတက်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ထုံးပေါတဲ့ အရပ်မှာ တူတူပဲ တက်တယ်။
See you there ! said...
"Burma VJ - Screening in Singapore"
Host: Arthouse Films in Singapore
Location: Jubilee Hall Raffles Hotel 3rd Level facing North Bridge Mcdonalds
My comment at this time has nothing to do with the post, Sorry!
But I just want to share an interesting " extensive interview of Than Myint U" with those who would be interested.
Ideologically, much of his thoughts should be taken into account seriously. But, personally, I do not find some of his plain scholarstic approach in assessing Daw Aung San Suu Kyi's struggle against the brutal military system very satisfying.
မရဘူး။ တောသားနဲ့ မြို့သူပဲ ဆက်ဖတ်ချင်တယ်။
စိတ်ပူ တတ်လို့ပါ ကိုပေါ ရယ်
ဘာ “Treatment” မှ မလိုပါဘူ..
ဒီအတိုင်းသာ ထား လိုက်ပါလေ
သူ့ အလိုလို “ပြတ်ကျ” သွားပါလိမ့်မယ်...
လေ့ကျင့်ခန်းပြင်းထန်တာနဲ့ဆီးသွားတာ သွေူးပါတယ်ဆိုတာကိုတော့သိတ်ပြီး ဆက်စပ်လို့မရဘူး. တိုက်ဆိုင်တာလဲဖြစ်နိုင်တယ်။ ဆိုင်ရင်လဲဆိုင်မယ်။
တိုက်ဆိုင်တော့လဲ ကြောက်သွားမယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နဲနဲပါးပါးတော့ ပြသာနာရှိမယ်မထင်ပါဘူး။